မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ စမတ်နာရီများ၊ တက်ဘလက်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အက်ပ်များ၊ ဂိမ်းများ၊ Androidsis
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ ၀ ယ်သင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကို - စမတ်ဖုန်းများ (သို့) Android ဖြင့်လည်ပတ်သည့်စနစ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဤစကြဝuniverseာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သောကင်မရာများ၊ စပီကာများ၊ နားကြပ်များ၊ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအရသင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားသော Android စက်ရှိမရှိသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ထိုက်တန်သည်ကိုသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ဤ Androidsis အမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုဤအမျိုးအစားတွင်တွေ့နိုင်သည်။
HAYLOU RS3၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
အကယ်လို့သင်ဟာဒီနွေရာသီမှာစမတ်နာရီတစ်လုံးကိုထုတ်ချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Androidsis ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ မင်းပေးချင်ရင် ...
Redmi Buds3Pro၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထင်မြင်ချက်
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ မင်းကိုကြိုးမဲ့နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမရင်ဆိုင်ရပါ၊
Realme GT - နက်ရှိုင်းသောကင်မရာစစ်ဆေးခြင်း
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Realme ကဒီ Realme GT ကိုခရစ်စမတ်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လူသတ်သမားအဖြစ်ပြသခဲ့ပါတယ်။
Realme GT သည် high-end တံခါးကိုဖြိုချလိုသည်။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ Realme နဲ့ဥရောပကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။
ZMI PurPods Pro ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
တဖန် Androidsis အတွက်နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ထူးခြားတဲ့ ZMI PurPods Pro …။
Xiaomi Mi 10 T Pro သည်အဆင့်မြင့်အစကိုမှတ်သားသည်။
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုနှုန်းသည်ပိုမိုပျံ့နှံ့လာသော်လည်း polarized ကဏ္ two နှစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါသည်။
Xigmer Lunar X01, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း
သင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဆိုဆက်လက်ခုခံတွန်းလှန်ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုယူဆောင်လာသည်။
စက်ရုံဖုန်စုပ်စက်များဖြစ်သော Yeedi နှင့်အတူ Actualidad Gadget သို့ကျွန်ုပ်တို့ Amazon သို့ပြန်လာသည်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏ ...
HAYLOU LS05S၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စျေးနှုန်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များ
ကျနော်တို့ Androidsis အပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူပြန်လာ။ ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့နောက်ထပ်စမတ်နာရီတစ်ခုကိုအချိန်အတန်ကြာစမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
Mibro အရောင် Smartwatch၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စျေးနှုန်း
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
ဒီနေ့ Mibro Color နာမည်ကြီးတဲ့ smartwatch ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး Androidsis ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြတယ်။ လွန်ခဲ့သော ...
Realme 8: ငွေတန်ဖိုးနှင့်စံအသစ်တစ်ခု
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
အာရှကုမ္ပဏီ Realme သည်ငွေရေးကြေးရေးအတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကို ဆက်၍ လောင်းနေပြီး၊
Chuwi Hi9 AIR အထူးကမ်းလှမ်းချက်၊ ပူးတွဲပါကူပွန်ကို သုံး၍ Prime Day အတွက်ယူရို ၄၀ လျှော့စျေး။ (ချုပ်ချုပ်နှင့်အဓိကမဟုတ်သော ၀ ယ်ယူသူများအတွက်သက်တမ်းရှိသည်)
vkworld S8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
Leagoo S8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ယူရို ၁၀၀ ကျော်လောက်အတွက်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့ terminal
Unboxing + ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း + စွမ်းအင်ဖုန်း Pro3လက်ဆောင် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်ဆောင်)
သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့် Android သန့်ရှင်းရေး application တစ်ခု
ကြီးမားသော3mAh ဘက်ထရီပါရှိသော Android Oukitel K6000 ကိုသုံးသပ်ပါ
Moto G5S Plus၊ သင့်အတွက်သင့်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
LeEco LETV S3၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
Ulefone Gemini Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Nokia3၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Doogee MIX အတိမ်အနက်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးကမ်းမှုများ!
Chuwi Hi10 Pro၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
BQ Aquaris X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Samsung Galaxy S6 Edge Plus ဘက်ထရီပြproblemsနာအတွက်ဖြေရှင်းနည်း
Moto Z ကစားခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
Meizu M5၊ သုံးသပ်မှုနှင့်အမြင်
သုံးသပ်မှု Ulefone Armor ကိုယူရို ၁၅၀ အောက်သာကျသင့်သည်